Umthetho Ifemi ke Isixhosa Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ngu inkokeli phakathi wamazwe ngamazwe firms, ngokubonelela ishishini umthetho ingcebiso ephezulu umgangatho kulo lonke Yurophu, Kumbindi Mpuma, e-Asia kunye NATHI. Kunye phezu, amakhulu amahlanu abaqondisi-mthetho kwamashumi amabini anesixhenxe iqhosha ishishini centers jikelele ehlabathini, sinike elizeleyo. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Ashurst yindlela ephambili wamazwe ngamazwe ifemi advising corporates, — mali amaziko kunye noorhulumente. Zethu ezingundoqo amashishini basemazweni corporate, iimali, imbambano isisombululo, uphuhliso kunye financing ka-yexabiso kwi-amandla, zokusebenza kunye neziseko macandelo. Umthetho Ifemi ke Isixhosa E Kilpatrick Townsend Stockton LLP, bethu attorneys ingaba ngokupheleleyo owenza impumelelo ifemi ke abathengi. Thina khulula iziphumo-oriented ingcebiso kuba amakhulu kwaphela stages ka-ukukhula emaphandleni, ukususela ngumngeni iimfuno-mali eyenziweyo kwaye securities ukuba omkhosi. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Mhlophe Kunjalo, waseka Enew York ngowe, sele abaqondisi-mthetho e-United States, isilatini America, i-Europe, Kumbindi Mpuma, e-Afrika kwaye e-Asia. Zethu abaxhasi zi yoluntu kwaye ngasese igcine abarhwebayo amashishini kunye mali amaziko, ngokunjalo noorhulumente imeko-owned karhulumente, obandakanyekayo. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Simpson Thacher Bartlett LLP ibonelela coordinated isemthethweni ingcebiso kwaye ukumelwa kwi ezinye likhulu kwaye uninzi complex ezinye kwaye litigation imicimbi ehlabathini. Zethu headquarter ofisi Enew York City umsebenzi tandem ne-ofisi yethu kwi-Beirut, Hong Kong, London, Columbia. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Davis Polk sesinye ihlabathi ke, inkulumbuso umthetho firms. Ezaziwayo kuba zethu skillful umsebenzi highly complex imicimbi asele kakhulu kubathengi bethu, siya kunikela amanqanaba aphezulu ukugqwesha kwaye breadth kuwo onke zethu iindlela ezilungileyo kwaye specialties. Wethu, abaxhasi, abaninzi kubo ishishini kwaye yehlabathi iinkokeli. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Upawulos, Weiss, Rifkind, Wharton Garrison LLP yi ifemi ngaphezu ezintandathu anamashumi abaqondisi-mthetho, kunye diverse backgrounds, personalities, izimvo kwaye umdla, abo intsebenziswano kunye abaxhasi ukubanceda athimba zabo ezininzi kakhulu isemthethweni imiceli-mngeni kwaye iinjongo zoshishino. Wethu ixesha elide-emi abaxhasi ziquka. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Foley Lardner LLP yi highly ithathwe, wesizwe umthetho ifemi ekuboneleleni umxhasi-focused, ishishini-ethile, iinkonzo ukuba iziphumo high-ixabiso isemthethweni ingcebiso kuba abaxhasi bethu. Zethu senzo kwiindawo encompass ngokupheleleyo umqolo we corporate isemthethweni iinkonzo, kuquka corporate ulawulo ukuthotyelwa kwemithetho. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Clifford Ithuba ngu omnye ihlabathi ke ezikhokelela umthetho firms, kunye amabini anesithoba ofisi kwamashumi amabini amazwe kwaye abanye, amabini anamashumi isemthethweni advisers. Enye lwahlulelwano, ifemi sele unrivalled umlinganiselo kwaye ubunzulu isemthethweni zokusebenza kwilizwe liphela, zine — iqhosha kwiimarike Baseamerika, e-Asia, i-Europe kunye Kumbindi Mpuma. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Ukusukela ungena Japan ngowe, Allen Overy LLP sele earned a zaziwa ngokuba liqonga innovative kwaye phezulu ingcebiso, uboniso ndlela complex eyenziweyo kwi-ngempumelelo inciphe. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Herbert Smith Freehills sesinye ihlabathi ke ezikhokelela elinolwazi iinkonzo amashishini, ukuzisa kunye eyona abantu kuwo zethu amabini anesithandathu ii-ofisi, bahlangana bonke yakho isemthethweni iinkonzo neemfuno ngqukuva. Sinako ukunceda ukuba baqonde amathuba xa yokulawula umngcipheko. Abaqondisi-mthetho kwi-Latham ke Tokyo-ofisi ukuqonda iimfuno kwaye imingeni ukuba abaxhasi ubuso. Ngapha umdibaniso ifemi ke intimate ulwazi Isijapanese imarike yayo, baninzi indawo khona ezweni, ifemi ngu ngokugqibeleleyo wabeka ukukhonza umnqamlezo-umda ishishini iimfuno abaxhasi. K L Amasango LLP limele ezikhokelela yehlabathi amakhulu, ukukhula koqoqosho eliphakathi-kwimakethi iinkampani, ikomkhulu kwiimarike abathabatha inxaxheba entrepreneurs kwi-wonke enkulu ishishini iqela ngokunjalo necandelo likarhulumente karhulumente, namaziko emfundo, philanthropic organizations kwaye abantu. Zethu senzo ngu robustly a. DLA Piper waba lelinye oyena isemthethweni inkonzo bamatyala ehlabathini kwi- nge-ukudibana ka-unprecedented ekhaya kwi-isemthethweni kwicandelo lezolimo. Xa inkulu kuzo umlinganiselo, ukudibana isicwangciso-buchule waba elula — ukwenza i-ngamazwe isemthethweni senzo capable ka-ethabatha nokukhathalelwa ibaluleke kakhulu isemthethweni iimfuno zabantu. V-Ventis LTD yinkampani ishishini umthetho ifemi esekelwe kwi-i-bangkok, Thailand ekuboneleleni ezahlukeneyo zeshishini olunxulumene neenkqubo zomthetho iinkonzo abaxhasi kwi-Thailand kwaye Japan, ngokunjalo kulo lonke ASEAN mmandla. Ifemi sele nomdla reputation phakathi abaxhasi kunye nabo ngenxa yabo nokuzinikela ekuboneleleni abaxhasi kunye. Morgan Lewis ke Tokyo-ofisi zethu inikezela abaxhasi sophisticated, esebenzayo ngokusemthethweni ingcebiso kwi-Japan. Zethu-ofisi combines yehlabathi zokusebenza ka-Morgan Lewis kunye izakhono nolwazi zethu Isijapanese edibeneyo nokulinga iqabane lakho, TMI Associates, ngokusebenzisa zethu Morgan Lewis-TMI edibeneyo nokulinga.
Hughes Hubbard Reed LLP limele zoshishino ezingama-ranging ukusuka ngasese-igcine iinkampani ukuba enkulu, esidlangalaleni-traded ngamazwe amakhulu. Ifemi ke ama abaqondisi-mthetho lokucebisa abaxhasi kwi abarhwebayo eyenziweyo, kuquka mergers kwaye acquisitions, financings kwaye edibeneyo kakhulu kwamaxabiso izivumelwano zokwakha uluhlu, ezigunyazisiweyo zengxelo. Ukwakha ukusuka yayo kweelwimi-ifumana imali kwaye securitization iindlela ezilungileyo, Atsumi Sakai siqulunqe ubunzulu iinkalo zobuchule ukuba ivakalisa kuwo yonke imihlaba ishishini kwaye iimali umthetho. Ifemi sele lunxulumano ukugqwesha kuba yayo innovative izakhono kwi-ezemali, ingakumbi kuba umsebenzi wethu kule projekthi. Owu’Melveny Myers LLP ngu lunxulumano njengoko omnye ezikhokelela wamazwe ngamazwe firms kwi-China, kunye senzo covering a ngokubanzi umqolo we imizi-mveliso, abaxhasi, kwaye imicimbi. Siza kunikela elinye yelenqe Isitshayina wobulali nokwazi-njani kwaye wamazwe ngamazwe ifemi ukugqwesha. Thina ikratshi ngokwethu kwi-fact. Shearman Isilivere LLP, yehlabathi umthetho ifemi, wenziwe advising abaninzi ehlabathini ke ezikhokelela amakhulu kwaye mali amaziko, noorhulumente governmental organizations kuba ngaphezu eminyaka. Nabaqondisi-mthetho zinikelwe ekuboneleleni isemthethweni ingcebiso oko kukuthi insightful kwaye exabisekileyo kubathengi bethu. Morrison Foerster ufumana i-global ifemi kunye phezu, abaqondisi-mthetho kunye elinesithandathu ofisi jikelele ehlabathini. Zethu attorneys share imigangatho ephezulu, ukuzinikela ukugqwesha, passion kuba ekuncedeni zabo abaxhasi waphumelela. Zethu Corporate Senzo limele ezinye ezininzi anako konke iinkampani ehlabathini. Dillon Eustace sesinye Ireland ke ezikhokelela umthetho firms lwesiqulatho apho kugxilwa kwi-mali iinkonzo, banking kwaye imali yentengiso, corporate-M-A, litigation kwaye imbambano isisombululo, real estate kwaye taxation. Mori Hamada Matsumoto ebelikhokelwa phezulu-rated abaqondisi-mthetho kuwo a libanzi umboniso ka senzo kwiindawo zethu enkulu iqela le iingcali zomthetho kwaye inkxaso abasebenzi kunikela ifemi zabo amava, iinkalo zobuchule kwaye onzima ukuzisa zethu abaxhasi iziphumo ezihle kwi-wonke mba siza ukuphatha. Upawulos, Hastings, Janofsky Walker LLP ufumana i-global umthetho ifemi kunye ishumi elinesibhozo kwi-ofisi enkulu ishishini centers kuwo e-Asia, i-Europe, ne-USA Zethu ugqaliso yindlela elula: Ukubonelela lwesivumelwano ukugqwesha kuyo yonke into senza. Kwi-namhlanje ke kwezoqoqosho-bume kubaluleke ngakumbi kunokuba ngonaphakade ukusebenza nge ifemi lonto
Ukunyanzeliswa Ukubhalwa Deportation ii-Odolo, Deportation, kwaye Kungokuzithandela phuma deportation yi-owakhe inkcitho - Immigration Bureau of Japan Kwiwebhusayithi